Kaftan Maxi Dress Asian Art - Buddhatrends
Ity asan-jatovo antsoina hoe Kaftan Maxi Dress io dia sangan'asa avy amin'i Maxi. Ny akanjo dia mampiavaka ny famolavolana vintage miaraka amin'ny maoderina Ny fanamafisana ny famokarana karazana lamaody ambony. Ny akanjo nentim-paharazana avy amin'i Kaftan Maxi no manome ny vehivavy rehetra izay mametraka azy amin'ny endrika fijery aristokratika.
Ny endriky ny akanjo dia mifangaro tsara ary nohavaozina. Manana endrika tsara tarehy amin'ny loko isan-karazany izy; anisan'izany ny maitso, mena ary manga, napetraka eo amin'ny lamba mainty. Io loko io dia mahatonga ny akanjo hikolokolo tsy ho menamena loatra.
The sleeves Mijanòna aorian'ny kôlôgahile Ny akanjo dia lava loko amin'ny fomba kaftana karazany. Misy poti on na lafiny ny akanjo. Iray amin'ny mainty mainty, ny iray hafa dia manintona, mampiaraka ny fofon'io akanjo io.
Ny akanjo dia mora azo ho an'ny amin'ny fotoana rehetra, satria mamisavisa ireo boaty ho an'ny endriny samihafa. Ny fomba nentim-paharazana Aziatika nentim-paharazana dia hampiavaka anao amin'ny vahoaka amin'ny antony tsara.